Iintsomi ezili-10 malunga nababhali eziyinyani (nobuxoki) | Uncwadi lwangoku
Xa ndandimncinci kwaye ndandidla ngokuxelela isihlobo ukuba xa ndikhulile ndifuna ukuba ngumbhali, impendulo, ehleka, yayithi "Abo bahlawulwa kuphela xa besifa, njengabapeyinti." Kwaye, kancinci kancinci, amagcisa ayakhula phantsi komkhethe wokuba ukubhala kulungile, kodwa ukuba ungugqirha, igqwetha okanye ibhanki ibhetele kakhulu, ekunokuthi ngemivumbo ebanzi kube luncedo ngakumbi kodwa ayisiyiyo kuphela ukhetho. Esi sesinye sezihloko ezininzi zombhali kwinkulungwane ye-XXI ngokuqinisekileyo enokuba ngaphezulu komnye wenu niyakuyichonga ngaxa lithile. Ngale nto kunye nezinye Iintsomi ezili-10 zababhali eziyinyani. . . nobuxoki.
1 Iintsomi eziyinyani
1.1 Umsebenzi wombhali ulilolo
1.2 Ukufunda kuhlala kunceda
1.3 Ukubhala ngumbandela wokuziqhelanisa
2 Iintsomi zobuxoki
2.1 Ukuphila ngokubhala akunakwenzeka
2.2 Ngababhali abaziingcali kuphela abanetalente
2.3 Ukuzipapasha yenye indlela elula
2.4 Sonke singamanxila
2.5 Wonke umntu angabhala
2.6 Umbhali kunye nomculo wakhe
3 Kwaye ukuthandabuza okungunaphakade
3.1 Ngaba umbhali uzelwe okanye wenziwe?
Umsebenzi wombhali ulilolo
Ukuba ungumntu ongahlali unxibelelana nabanye ababhali, mhlawumbi akukho mntu uya kukuqonda ngaphaya kombuzo oqhelekileyo othi "Ngaba uza kupapasha into entsha?"; Kwaye ngoku, ubukhulu becala ngenxa yokuba umhlaba uqhubeka nokuthathela ingqalelo ukubhala ngakumbi njengezinto zokuzonwabisa kunokuba ube ngumsebenzi obalulekileyo ukuba awukhange upapashe nantoni na okwangoku. Kwangelo xesha, kubonakala ngathi kukho ukungathembani okuthile kumbhali xa kufikwa ekwabelaneni ngezimvo zakhe, zokuvumela umntu okanye enye into ukuba ingene phakathi kwakhe kunye neloo lizwe lihambelanayo lisakhiwa apho ahlala khona kuphela. UGabo sele eyithethile le nto: «Ndiyakholelwa ngokwenene ukuba kwimisebenzi yoncwadi umntu uhlala eyedwa, ngathi yinto yokulahla phakathi elwandle. Ewe, ngowona msebenzi unesizungu emhlabeni. Akukho mntu unokukunceda ubhale le nto uyibhalayo. '
Ukufunda kuhlala kunceda
Umbhali unokubanakho ukudala, kodwa uya kuhlala efuna ukuba afunde abanye ababhali ukuze bakhulise isimbo sakhe, alinge kwaye, ekugqibeleni, abe nakho ukulufaka olu luvo lubalaseleyo ngeyona ndlela ilungileyo. Ukufunda akukwenzi ube ngumbhali ongcono, kodwa kuyanceda.
Ukubhala ngumbandela wokuziqhelanisa
Izimvo zisenokuba zintsha nje kwiminyaka engamashumi amabini njengokuba zinjalo kwiminyaka yethu yamashumi amahlanu, kodwa ukuziqhelanisa ngumba oya kuthi uchaze ukuba sifunda njani ukuziphuhlisa kwaye siqonde amandla abo apheleleyo; inqanaba elifikelelwa kukuziqhelanisa, ukuphinda ufunde, ukulungisa kunye nokuthatha umngcipheko.
Ukuphila ngokubhala akunakwenzeka
Kwiminyaka engamashumi amabini eyadlulayo kwakungekho bhlog, kwaye kwakungekho amaqonga okuzipapasha kunye nezinye izinto ezininzi ukubonisa iingcinga zakho kwihlabathi. Kwelinye icala, namhlanje izinto zahlukile, ngakumbi kuba wonke umntu angazenza umbulelo kwibhlog yoncwadi, incwadi epapashwe nguwe okanye ewe, ngokusebenzisa umsebenzi opapashwe ngumshicileli. Kuba nangona iilebheli zokupapasha zihlala zilicebo elibukhali kakhulu, ziya kuhlala zikhangela izimvo ezintsha, zilungiselele ukhuphiswano kwaye, ekugqibeleni, ziya kuba nakho ukuvumela yenza ukubhala okuphilayo ukuba le ncwadi iyabaqinisekisa (kwaye iyathengisa, kunjalo). Mhlawumbi akukho baninzi ababhali abaphila kuyo kuphela ngendlela esingathanda ngayo, kodwa akunakwenzeka, oko kuthiwa akunakwenzeka, akunjalo.
Ngababhali abaziingcali kuphela abanetalente
Isizathu sokuba incwadi ithengise kakhulu yinto apho ngamanye amaxesha intengiso eninzi ibandakanyeka. Kwi-Amazon, umzekelo, sinokubona abathengisi abathengisa kakhulu abanezimvo ezingama-50 ezimbi nezingama-20 ezilungileyo ezifundwayo kuba zinika ingxoxo okanye zeza ngexesha elifanelekileyo ziqhutywa ngumshicileli okanye u-X wokubhala. Nangona kunjalo, le nto ihlala ikude kumgangatho womsebenzi ngokwawo, ngababhali abaninzi be "novice" abanokubhala amabali afanelekileyo njengabo babhali banamava.
Ukuzipapasha yenye indlela elula
Xa uqala ukufumanisa Amaqonga okuzipapasha njenge-KDP yeAmazon okanye iBubok Amehlo akho avulwe nangakumbi: ukuze ukwazi ukupapasha inoveli yam ngokwakho. . . kwaye uyenze iphumelele!? Kwithiyori umbono mkhulu, kodwa xa uziqhelanisa nokuzipapasha uneenkcukacha ezincinci umbhali ebengenakuba nazo ukuba upapashe umsebenzi wakhe nompapashi: kufuneka unakekele isiciko, ulungiso, uguquko kwi-epub, mobi kunye nezinye iifomathi ebesingazazi okanye bezikhona, ukuzipapasha, ukuzisasaza, ukunxibelelana nabafundi, ukunkqonkqoza kwiminyango yeeblogi zoncwadi kunye noluhlu olude lwezinto ekufuneka uzithathele ingqalelo ngaphambi kokuba uzazise ichibi elinokuthi kwelinye icala likunike uvuyo oluninzi.
Ndiyavuma ukuba ngobunye ubusuku bokubhala iglasi yewayini iye yanyonyoba phezu kwedesika, kodwa hayi ngenxa yeso sizathu sonke silala kwiibhedi ezingqongwe ziibhotile zaseRioja ezingenanto kwaye singatshayi umbhobho opium ukumema inkuthazo. Intsomi yombhali we-bohemian ngamanye amaxesha inokuboniswa kwindlela acinga ngayo, kodwa hayi rhoqo kwindlela yakhe yokwenza okanye kwindalo iphela ukuba iimuvi ezinje ngoMoulin Rouge zisithengisile. Ababhali abaninzi bayazikhathalela, bayokutyibilika nabantwana babo ngeeCawa kwaye benze eminye imisebenzi ngokuhambelana nomsebenzi wabo, bekhokelela kubomi obucwangcisekileyo nobucocekileyo.
Wonke umntu angabhala
Ukuba sizibeka ngoluhlobo, ewe, wonke umntu angabhala, kodwa xa kufikwa ekwenzeni ibali okanye inoveli, izinto azikho lula kangako. Ewe abantu abaninzi abangazange bakuthathele ingqalelo ukubhala baqala ngenoveli usapho lwabo, abahlobo kunye nesoka abanokuyithanda kodwa umgangatho wayo ngokucacileyo awulindelekile. Bhala incwadi elungileyo Izoba kwizinto ezininzi kwaye ukuzidibanisa zonke akukho lula kangako.
Umbhali kunye nomculo wakhe
Eyona ntsomi ye-bohemian yayo nawuphi na umbhali ihlala kubukho babo, kwaba bafazi (okanye emadodeni?) Abangenzi nto ngaphandle kokuhamba hamba ngeenxa zonke kuthi ukusinika umoya wokuyila. Nangona kunjalo, inyani yahluke mpela: akukho themba silindeleyo xa sifika ekhaya okanye sisebezela ezindlebeni zethu into emasiyenze. Endaweni yoko, kukho iindawo, iimeko kunye nabantu kubomi bemihla ngemihla abanokusikhuthaza.
Kwaye ukuthandabuza okungunaphakade
Ngaba umbhali uzelwe okanye wenziwe?
Kukho amakhulu emibono ejikeleze owona mbuzo ubalulekileyo kwizangqa zoncwadi. Ngokoluvo lwam, umbhali uzelwe, nangona akunyanzelekanga ukuba abazi ubungakanani bakhe kwasekuqaleni. Abanye bazalwa benesiphiwo abasisebenzisayo besebancinci, ngelixa abanye kufuneka baphonononge inkcubeko, bafunde iincwadi, okanye bazame ukubekela bucala ixesha lokuvavanya ukuba "idlala njani le ntsomi" ukuze baqonde ukuba inkanuko kudala ilala. Kodwa njengoko ndithethayo, wonke umntu unoluvo malunga noku kwaye awusoze uthathe nantoni na xa usiza kwimicimbi yezobugcisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Iintsomi ezili-10 malunga nababhali eziyinyani (nobuxoki)
UCayetano Martin sitsho
Umbhali uyazalwa kwaye wenziwe, zombini ezi meko kufuneka kuhlangatyezwane nazo
Phendula Cayetano Martin
Inqaku lilungile, kodwa inye kuphela into endingavumelani nayo kukuba umbhali uzelwe kuba ndiyakholelwa ukuba izipho ziyafezekiswa ngomsebenzi, ngomzamo nangomnqweno, andazi le nto ithi: Ukusukela ekuzalweni.
UFRANCISCO MARIN sitsho
Ngokombono wam, umbhali wenziwe, nokuba ebuntwaneni okanye kamva. Umbhali kufuneka aqale abe ngumfundi emva koko asebenze kuyo. Konke okugqibelele
Phendula uFRANCISCO MARIN